FALANQEYN: Maxay ka bedeli kartaa Ammaanka Puntland in Ciidamo AMISOM ka socda la geeyo Iyo in kale. | SAHAN ONLINE
FALANQEYN: Maxay ka bedeli kartaa Ammaanka Puntland in Ciidamo AMISOM ka socda la geeyo Iyo in kale.
Ergayga gaarga ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa u sheegay maalmo ka hor in Ciidamo ka socda hawlgalka Midowga afrika ee AMISOM la geeyo deegaanada Puntland.
Nicholas Kay ayaa hadalkaan u cuskanayey sheegistiisa weeraro dhowr ah oo Kooxda Al-Shabaab sheegteen oo ka dhacay magaalooyinka Boosaaso,Garoowe oo lagu qarax ismiidaamin ah lagu dilay Shaqaale UNICEF ah iyo Buurlayda Galgala.
Ciidamada AMISOM ayaa garab istaagooda Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ka sakow ,waxay shaqadooda kale ay tahay ilaalinta shaqaalaha Caalamiga ah ee ka shaqeeya gudaha dalka.
Markaan dib u yara milicsano taariikhda hawlgalkan Gollaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ogolaaday in Ciidamadan la geeyo Soomaaliya ,waxayna xiligaas Xooga Ciidamadan ka imaanayeen lixda dalka Uganda,Burundi,Jabuuti,Kenya,Itoobiya Siraliyoon.
Ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka ayaa lagu qiyaasa iney kor u dhaafeyso Labaatan kun balse waxaa kaloo jira dalal aan Ciidanka kuwa aan Milateriga ahayn usoo diray Soomaaliya sida Zambia,Senegal,Nigeria,Niger,ghana iyo gambia.
Puntland Maxay ka walwal qabtaa?
Dawladda Puntland iyo Shacabkeeda waxay mowqif adag iska taageen in Ciidamo ka socda AMISOM la keeno deegaanada Puntland ,waxaana khuburada Siyaasada ku sheegeen walwalkaas laba arrimood sida:
01. Ciidamada AMISOM meesha ay tagaan ama la geeyo ay isku bahaysan doonaan wax alaale wixii xagjir ah kuwaas oo dhanka al-Shabaab kusoo biira lana dagaalama Ciidamada iyagoo loogu sheekeynayo gaalo soo duushay.
02. Siyaasada kuyara jirta Ciidamada shisheeye,waxaa loogu talagalay iney fidiyaan meelaha ay dawladu ka taliso marka waxa ay ka baqayaan dad badan oo Siyaasiyiin ah oo reer Puntland ah iyo dad badan oo shacab ah in dawlada dhexe meesha ku xoogeysato iyadoon heshiis gaar ah la gelin.
Dhinaca kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo Xiriirka Caalamiga ah ku takhasusay ayaa isagu qaba in Puntland aysan hadda Ciidan AMISOM ah u baahneyn garna ay u leedahay in keenista Ciidankaas iska diido.
Wuxuu sheegay in Puntland u baahantahay in Ciidamadeeda la xoojiyo loona sameeyo tababar iyo qalabeyn xoogan isla mar ahaantaana la dhiirigeliyo mooralka Ciidamada mudada aan mushaharka qaadan.
Ciidamada ilaalada u ah shaqaalaha Caalamiga ah siiba kuwa Qaramada Midoobey ayaa ah kuwa hoos taga Xafiiska Siyaasada QM ee Soomaaliya tan kalena Xafiisku waa maareeyaha ugu weyn ee dhaqaalaha maamulada kala
duwan ee Soomaaliya la siiyo.
Maxay kula tahay akhriste haddii Dawladda Puntland sheegtay iney awood u leedahay difaaca Xuduudaheeda iyo amniga gudaha isla markaana loo baahneyn in Ciidamo ka socda AMISOM la geeyo Puntland….?
SULAIMAN A. SHIRE